Misokatra ho an’ny rehetra ankehitriny ny dobo filomanosana ao Andranovisy Antsirabe taorian’ny fanamboarana sy ny fanatsarana izany hanaraka ny fenitra Olimpika. Isan’ny mampiavaka ity dobo filomanosana ao an-drenivohitr’i Vakinankaratra ity ny hafanany voajanahary, izay tena sahaza ho an’ny vatana sy ny fahasalamana raha ny fanazavana nomen’Atoa Ravelomanantsoa Armand, tompon’andraikitry ny dobo filomanosana Andranovisy.
samedi, 23 janvier 2016 22:49
ORTVA Antsirabe : Mbola nitokisan’ny rehetra ny mpitantana
Tontosa ny harivan’ny Alakamisy 22 Janoary lasa teo ny fanavaozana indray ny mpitantana ny ORTVA na ny « Office Régional du Tourisme Vakinankaratra », ka mbola voafidy ho filoha hitantana izany mandritra ny roa taona indray Rtoa Andrianaivo Rosette, arahin’ny Dr Andriamampandry Tantely ho mpanampy azy.
vendredi, 22 janvier 2016 18:37
Mahajamba : Lehilahy iray efa maty hita nitsingevana teny ambony rano
Io hariva io dia eo ampitaterana ireo traboina hiampita rano ny vedette-n'ny Aqualma no nahita faty efa nitsingevana teny ambony rano. Marihina fa efa mahatratra 3000 amin'izao ny traboina any an-toerana, ny ao amin'ny fokotany Besakoa izay tsy tratran'ny rano, dia nandray ireo mponina efa tsy zakan'ny eny Ambodimanga, ny sekoly EPP dia efa feno traboina 350.
jeudi, 21 janvier 2016 18:38
« Permis de conduire biométrique » : Natomboka ny any Mahajanga
Roapolo minitra fara-fahelany dia vita ny karatra fahazoan-dàlana mamily fiarakodia « biométrique » iray. Natomboka tamin’ny fomba ofisialy androany ny fanovana io fahazoan-dàlana io ho an’ny tao Mahajanga. Tao amin’ny Ivon-toerana mpanome laharan’ny fiara na Centre immatriculateur (CIM) Mahajanga, ao amin’ny Bloc Administratif Ampisikina no nanatanterahana izany.
jeudi, 21 janvier 2016 12:59
Akademia Miaramila Antsirabe : Notoloran’ny Firenena Mikambana boky marobe
Mitohy ny fiaraha-miasan’ny Akademia Miaramila Antsirabe sy ny sapan’asan’ny Firenena Mikambana miaro ny Zon’olombelona eto Madakasikara. Ny Alakamisy 21 Janoary dia isan’ny vahiny manankaja noraisana tamin’ny fomba Ofisialy ny solontena vonjimaikan’io sampandraharaha io, Atoa Omer Kalameu, mpanolotsaina, izay misolo toerana vonjimaika ny sampan’ny Firenena Mikambana eto Madagasikara izay nanolotra boky ho an’ny sekolin’ny manamboninahitra ao Antsirabe.
mercredi, 20 janvier 2016 19:15
Fihaonana fanomanana ny francophonie
Tsy natao ho fihaonana ara- politika ihany fa mivelatra hoan'ny vahoaka malagasy, izay no navoitra teny Iavoloha io tolakandro io raha nandray ireo vahiny solon-tena mpikarakara mahakasika izany ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina
mercredi, 20 janvier 2016 13:02
Antalaha : Roa herinandro tsy nisy fiaramanidina
Mahagaga ny any Antalaha ny tsy isian’ny sidin’ny Air Madagascar mankany an-toerana nefa feno hatrany ny fiaramanidina miala any ary misy mpandeha tavela aza fa tsy zaka. Amin’izao na fiaramanidina madinika toy ny Twin aza tsy tonga any. Andaniny voalaza fa mamono antoka ny zotra mankany Antalaha, ankilany indray dia ny haratsin’ny « piste » no tsy isian’ny sidina any. Mahatsiaro mijaly noho izany ireo mpandeha Maroantsetra, Toamasina, Antananarivo. Nisy ny fivoriana notarihin’ny lehiben’ny distrikan’Antalaha, nandraisan’ireo mpandraharaha ara-toekarena sy ny mpitantana ny seranana ny talata teo, tsy hanaiky ny fanakatonana ny seranam-piaramanidina.
Alasora lasa toerana fanariam-pako, tsy manaiky ny mponina
mardi, 19 janvier 2016 22:48
Alasora: Lasa toerana fanariam-pako, tsy manaiky ny mponina
Nisavorovoro ny mponina teny amin'ny tananan'ny kaominina Alasora io tolakandro io fa mandritry ny telo andro be izao dia hatobaka eny an-toerana ny fako izay tokony ho eny Andralanitra. Tsy manaiky ireto farany fa dia mangataka ny hamerenana ireo fako any amin'izay tokony hisy azy. Ny eo anivon'ny ministeran'ny Rano indray anefa dia miziriziry amin'ny heviny fa tsy maintsy ho tanterahina ny baiko izay nolazain'ny lehibe eo anivon'ny ministeran'ny rano. IZA NO DISO araka ny nambaran'i Andriavelojaona Luciano Elhy ao amin'ny Direction du Systeme d'Information et de la Communication (DSI)?
dimanche, 17 janvier 2016 23:31
Mahamasina: Fanompoam-pivavahana FJKM
Notanterahina tetsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina anio alahady ny vavaka fisaorana sy fiderana an'Andriamanitra noho ny taona vaovao 2016. Nentina ambavaka arak'izany ihany koa ny Pastora Lala Haja Rasendrahasina mivady izay Filohan'ny FJKM.Nitarika ny fanompoam-pivavahana i Radimison Jonah ary nitory ny tenin'Andriamanitra ny Mpitandrina Lala Rasendrahasina.
jeudi, 14 janvier 2016 14:36
Menaka azo avy amin’ny voatavo : Azo hitsaboana ny olan’ny prostaty sy vato amin’ny voa
Taorian’ny famoahan’ny farmasiana Dr Ramerison Auguste ny menaka “Foraha” azo hitsaboana ireo karazana fery samihafa, sy fanalana ireo tasy amin’ny vatana, ary fanalana ireo olatra navelan’ny fandidiana; dia namoaka ny menaka azo avy amin’ny voatavo na pongy indray izy ankehitriny. Nisy ny fanazavana ny pitsopitson’ity menaka vaovao vao navoakany ity tao amin’ny efitrano malalaky ny Fafed Toamasina. Raha ny fikarohana nataony dia azo ampiasaina tsara amin’ny fitsaboana aretina maromaro ity menaka azo avy amin’ny voatavo na pongy ity. Isan’izany ny olan’ny prostaty eo amin’ny lehilahy, ny olana amin’ny voa indrindra ho an’ny vehivavy, ny vato mipetraka amin’ny voa, azo atao ody kankana mipetraka amin’ny lalan-kanina, manala fovontosan’ny hozatra tampoka (crampes), ary azo hitsaboana ihany ny fery anaty vava sy ny fahasimban’ny nify vokatry ny mikraoba.